Tsy mahita ny mailako aho
2011-06-07 @ 20:59 in Ankapobeny
Somary hiresaka zavatra hafa indray aho ary atao hoe fiainana an-tserasera indray ity resahina ity. Niditra tamin'ilay Yahoo Mail vaovao miloko manga antitra iny ny tena fa tahaka izay nidiran-doza. Rehfa tafiditra ao amin'ny boaty fandraisana aho ka hiditra amin'ny lisitra tsirairay dia tsy misy hita avokoa fa fotsifotsy mangotatana fotsiny no solon'ny votoaty. Nidirako tsirairay daholo ny "taratasy" rehetra fa taratasy fotsy daholo. Gaga aho, noankotrihina (update) fa tsy nisy fiovana. Inona ary ity loza nidirana ity ho'aho? Andao hisolo fafana hoaho ka tsy ato amin'ity Google Chrome ity aho no hijery ny mailaka fa jerena kely ao amin'ny Mozilla Firefox indray. Niditra tao amin'ity notononiko farany aho dia hitako fa indreo hita ny votoatin-tsoratra lasa taratasy fotsy ao amin'ny Google Chrome. Dia asa any aminareo izay efa nanova mailaka Yahoo ho ilay farany iny raha tratran'io nolazaiko io ianareo fa mitantara aho hijeren'izay manam-pahaizana aminareo azy!